Ogoow waxa ay ka dhigan tahay SADDEXLEYDII uu Sergio Aguero caawa ka xareeyay kooxda Chelsea – Gool FM
Goolasha kooxda Blues looga adkaatay waxaa saddex ka mid ah dhaliyey Sergio Aguero, labana waxaa saxiixay Raheem Sterling, halka goolka kale uu dhaliyey Ilkay Gundogan.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa saddexleeydii uu Sergio Aguero caawa ka xareeyey kooxda Chelsea:-
>- 11- Sergio Aguero ayaa noqday ninka ugu saddexleeyda badan taariikhda horyaalka Premier League, waxaana uu barbareeyey Alan Shearer oo 11 hat-trick ka dhaliyey horyaalka Premier League.
>- Sergio Aguero ayaa noqday ciyaaryahankii shanaad ee saddexleey dhaliya kulamo isku xiga oo garoonka kooxdiisa ah horyaalka Premier League iyo madkii ugu horreeyey ee sidaas sameeya tan iyo Didier Drogba bishii Agoosto sanadkii 2010-kii.
>- Sergio Aguero ayaa sagaal saddexleey oo horyaalka Premier League ah ku dhaliyey garoonka Etihad, waxa uuna noqday ciyaaryahanka ugu badan ee hal garoon saddexleey ku dhaliya, isagoo rikoorkaas ka jabiyey Thierry Henry oo garoonka Highbury ku dhaliyey siddeed hat-trick.
>- Sergio Aguero ayaa horyaalka Premier League ka goolal badan kooxda Chelsea 2019, intii lagu guda jiray sanadkan kooxda Blues waxa ay horyaalka Ingiriiska ka dhalisay 7 gool, halka Aguero uu ka dhaliyey 8 gool.
>- Dhinaca kale 35-2 – In 2019, kooxda Manchester City oo uu ka tirsan yahay Aguero ayaa guuleysatay todobadii kulan ee ay tartamada oo dhan ku ciyaartay garoonkeeda Etihad, waxaana ay dhalisay mudadaas 35 gool, iyadoo laga dhaiyey kaliya 2-gool.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Athletic Bilbao Vs Barcelona